Goob amaan ah (Barnaamijka Maraykanka ee Qorista Qaxootiga) - CORENav
Tani waa Meel Badbaado u ah Qaxootiga
USRAP waxay u adeegtaa ayna difaacdaa qaxootiyaasha ayadoon laga fiirinayn dhalashadooda, isirkooda, diinta, sinjiga, ama qaabka galmada. Waan ognahay in aad murugo soomari karo noloshaada aadna ahaan karo dhibane lasoo jirdilay, lagu sameeyay xadgudub dhanka jinsiga ah ama xad gudubyo xuquuqaha aadamaha ah oo kale. Waa caadi inaad usheegto waxaad soomartay shaqalaha kiiskaaga ama kormeeraha xili walba. Shaqaalahu waxay marwalba xifdinayaan sirnimada macluumaadkaaga.
Haddaad rabto in adiga iyo xaaskaaga isku jinsiga tihiin inaad iskusoo raacdaan Maraykanka, sidaas waad samayn kartaa haddii adiga iyo xaaskaaga aad is qabtaan si sharci ah. Si guud, sharciga meesha aad iskuguursateen ayaa go’aaminaaya in guurkaagu uu xaq uleeyahay soogalida Maraykanka. Dadka isku jinsiga ah ee isqaba kuwaasoo xaq uleh inay helaan USRAP waxaa la isku kaabi karaa kiisaskooda si isku meel looga dajiyo Maraykankahaday xaq uyeeshaan dib udajin.